Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo is casilay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaRa’iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo is casilay
Hiiraan Xog, Feb 15, 2018:- Warbaahinta dalka Itoobiya ayaa ku warrantay in uu xilki Ra’iisul wasaarannimo iska casiley Haiemariam Desalegn. Waxa uu sidoo kale Desalegn uu ka tagay guddoomiyannimadii xisbiga talada haya ee dalka Itoobiya ee EPRDF.
Warkan ayaa waxa baahiyay TV-ga dowladda maamusha ee EBC TV ee dalka Itoobiya.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in is casilaadiisa muhiim u tahay nabada iyo dimuquraadiyada dalka, isaga oo sheegay in ay tani horseedi doonto isbadal dhinaca maamulka ah.
Rabshadaha iyo kacdoonka Itoobiya ayaa bilaawday dhamaadkii sanadkii 2015ka, waxaana ay dibadbaxyada socda ku soo fideen gobollada ay ku xoogan yihiin qomiyadaha Oromada iyo Amharada.
Ra’iisal wasaare Desalegn ayaa xilka sii heyn doona inta baarlamaanka uu ka soo dooranayo ra’iisal wasaare cusub.